Nagu saabsan - MAKEFOOD INTERNATIONAL CO., LTD
Waxaan ku talaabsaneynaa talaabo talaabo talaabo ah oo aan uga qaadayno helitaanka-tagga.
Makefood International waxaa la aasaasay sanadkii 2009. Ganacsiga ugu weyn ee shirkaddu waa soo dejinta iyo dhoofinta cunnooyinka badda. Makefood International waxay heshay shahaadooyinka MSC, ASC, BRC iyo FDA sanadkii 2018.
Qiyaasta iibku waxay gaadhay 30,000 tan sanadkiiba iibkuna wuxuu gaadhay 35 milyan oo dollar sanadkii hore.
Shirkaddu waxay u dhoofisay wax soo saarkiisa adduunka oo dhan, oo ay ku jiraan in ka badan 50 dal oo ku yaal Waqooyiga Ameerika, Koonfurta Ameerika, Afrika iyo Yurub.
Waxaa jira in kabadan 30 nooc oo noocyo kaladuwan oo shey ah oo ay kamid yihiin Tilapia, Whitefish, Salmon, Squid, iwm.
Shirkaddu waxay leedahay 30 shaqaale xirfadlayaal ah oo tayo leh si ay u siiyaan macaamiisha taageero luqado badan ku hadasha.
Sanadkii 2017, xafiiska Qingdao waxaa loo aasaasay inuu macaamiisha siiyo khibrad adeegsi oo raaxo leh iyada oo loo marayo habka ganacsiga fudud.
In 2018, xafiiska Zhangzhou waxaa loo aasaasay si loo hubiyo amniga cuntada iyada oo loo marayo xakamaynta tayada adag.
Makefood International waxay heshay shahaadooyinka MSC, ASC, BRC iyo FDA sanadkii 2018.
Sanadkii 2020, waaxda ganacsiga gudaha ayaa la aasaasay, taasoo furtay rajo cusub oo ah inay siiso macaamiisha gudaha wax soo saar tayo sare leh oo nabdoon.
In 2020, xafiiska Dalian waxaa loo aasaasay inuu balaariyo kanaalka qaybinta iyo wax soo iibsiga. Heerka sare ee QC, macaamiisha waxay ku kalsoonaan karaan iibsashada alaabooyinka aan bixinnay.
Shirkaddu waxay sameysay dadaal kasta oo ay ku noqoneyso lamaanayaal lagu kalsoonaan karo macaamiisheenna iyadoo lagu saleynayo waxtarka labada dhinac iyo iskaashiga guuleysiga ah tobankii sano ee lasoo dhaafay.
Sanadaha soo socda, waxaan sii wadi doonnaa inaan sii wadno iimaankeena, horey u sii wadno si aan u siino cunno badan oo caafimaad leh macaamiisha adduunka iyadoo la kaashanayo macaamiisheena iyo alaab-qeybiyeyaasha!
Alaabada Kulul, Khariidadda bogga, Shiinaha Qaboojiyay Tilapia GS, ASC tilapia fillet, Qaboojiyay Tilapia dayax gooyay, Shiinaha Tilapia GS, Tilapia qaboojiyay GGS, Shiinaha Qaboojiyay Tilapia,